डा. अरुणकुमार सिंह, बालरोग विशेषज्ञ, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान
डाकटर साहेब हुनुस न मेरो बच्चा लाई रात भर घ्यार घ्यार हुने गर्छ के गरु त् ? यस्ता बाल बालिका ओ.पी.डी.,इमेरजेन्सीमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान देखा पर्दछन!बालबालिकाहरुको मृत्यु गराउने प्रमुख रोगहरु मध्ये निमोनिया मुख्य रोग हो।मौसम परिवर्तनसँगै सामान्य रुघाखोकी देखिनु स्वाभाविकै हो । छिनमै चर्को गर्मी त छिनमै झरर पानी पर्ने अहिलेको मौसममा रुखाखोकीको सम्भावना बढिरहेको हुन्छ । तर, यो रुघाखोकीलाई बेवास्ता गरियो भने यसले निमोनियासम्मको डरलाग्दो अवस्था मा पर्न सक्छ । मौसम परिवर्तनसँगै जनकपुरधाम मा पनि निमोनिया को रोग बल बालिका मा बढी रहे को छ ! यसको संक्रमण सबैभन्दा बढी २ वर्षमुनिका साना बालबालिकाहरुलाई हुन्छ र त्यो उमेर समूहमा मृत्युको पहिलो कारक पनि निमोनिया नै हो।
विश्वभर वर्षेनी ५ वर्षमुनिका १६ लाख बालबालिकाको मृत्यु निमोनियाले गर्दा हुन्छ । नेपालमा ५ वर्ष मुनिका ३५ लाख वच्चाहरु मध्ये ५६ सय जनाको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुनेहरु मध्ये ९८% बालबालिकाहरु नेपाल जस्तो कम विकासोन्मुख देशका पर्दछन्। आँखाले देख्न नसकिने सुक्ष्म जिवाणुहरु हो जुन प्रत्येक मानिसको नाक र घाँटीमा हुन्छ तर यी जिवाणुहरु जब फोक्सो भित्र पस्छ यसले संक्रमणले निमोनिया गराउँछ।
आखिर घ्यार घ्यार निमोनिया के हो ? निमोनिया हुनु धरै अभिबाकहरु को चिन्ता को बिषय रहेको छ !निमोनिया बारे जानकारी हुनु पर्छ !
निमोनिया भनेको फोक्सोमा आउने एक प्रकारको खराबी हो। जसमा फोक्सोका कोषहरू सुनिन्छन् अनि श्वासप्रश्वासमा बाधा पुग्दछ। निमोनिया हुँदा फोक्सो सुन्निन्छ, त्यसमा तरल पदार्थ जम्मा हुन्छ । यो संक्रमण भाइरस, ब्याक्टेरिया वा परजीवीबाट हुन्छ ।
निमोनियाको उपचार कसरी गर्ने ?
एक्सरे र खकारको परिक्षणबाट निमोनिया लागे नलागेको थाहा पाउन सकिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा एन्टीबायोटिक औषधी दिएर निमोनियाको उपचार गर्न सकिन्छ !शिशुहरुमा विशेषत नवजात शिशुहरुलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ।
निमोनिया बाट कसरी जोगाउने त ?
जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्छ । त्यसपछि पोसिलो र ताजा खानेकुरा पनि थप्नुपर्छ ।
बच्चालाई न्यानो तर हावा आउन जान सक्ने कोठामा राख्नुपर्छ ।
धुलो र फोहोर वातावरणमा खेल्न दिनु हुँदैन ।
चिसोपानीले नुहाइदिनु हुँदैन ।
बालबालिका भएको ठाउँमा धूमपान गर्नु हुँदैन ।
बालबालिकालाई पानीमा भिज्न दिनु हुँदैन ।
न्यानो लुगा लगाइदिनुपर्छ, सकभर भान्सा कोठामा राख्नुहुँदैन । धुवाँ, धुलो र मट्टीतेलको खारबाट जोगाउनुपर्छ ।
वाल बालिका मा उपचार को लागि खोप र समय मा चिकत्षक को सालाल्य लिनु पर्ने जारी जरुरी छ !